प्रचण्डद्वारा कान्तिपुर यसकारण बहिस्कार ! – Nepal Journal
प्रचण्डद्वारा कान्तिपुर यसकारण बहिस्कार !
Posted By: Nepal Journal December 28, 2017 | १३ पुष २०७४, बिहीबार १७:२७
काठमाडौं । बुधवार बेलुका ९ बजे धेरै दर्शकले कान्तिपुर टिभी खोलेर बसेका थिए । सबैको ध्यान थियो माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले के बोल्छन् । समाचारहरुमा आइरहेका थिए एमाले र माओवादी केन्द्रको सम्बन्ध चिसिँदैछ प्रचण्ड मुख्य प्राथमिकता छोडेर चितवनमा ५ दिनदेखि सामान्य कार्यक्रममा अल्झिरहेका छन् । उनले वीरगञ्जमा बसेर मधेसवादी ठूला नेताहरुसँग पालैपालो भेटमात्र गरेनन् भारतीय दुतावासका काउन्सिलरलाई पनि भेटे । पार्टी अध्यक्ष नपाउने भएपछि प्रचण्डले मधेसवादी दलसहित कांग्रेससँग मिलर सरकार बनाउँदैछन् भन्ने हल्ला पनि उत्तिकै चलेकै थियो ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पहिले नै पाँच वर्ष सरकार चलाउन भनेको भनेर हल्लाहरु बजारमा चलिरहेकै थियो । यस्तो अवस्थामा प्रचण्डको अन्तर्वार्ता सबैको लागि चासोको बिषय थियो । यहि महत्वलार्य बुझेर होला कान्तिपुरमा आएको यो बिज्ञापन हेर्नुस् ।
तर प्रचण्डको ठाउँमा उपेन्द्र यादवलाई देख्दा दर्शकहरु खिन्न भए । नहुनपनि कसरी । सामान्य दर्शलाई त थाहा भएन । तर पत्रपत्रिका पढेर धारणा बनाउन सक्नेले भने विभिन्न अड्कल काट्न थाले । अड्कल काट्नलाई आधारहरु पनि देखिए । दुईटा संचार गृह कान्तिपुर र थाहा संचारबीचको संचार युद्धको घानमा प्रचण्ड परेको अनुमान गर्न थालियो ।
कान्तिपुर दैनिक पत्रिकाले प्रचण्डसँग नजिक मानिएका संचार व्यवसायी अजय सुमार्गीको २२ अर्ब अवैद्य रुपैयाँ निकाल्न लागिएको समाचार छाप्यो । हुनत यो समाचार कान्तिपुरले केही वर्षदेखि उठाउँदै आएको बिषय हो ।
कान्तिपुरमा समाचार आएपछि सुमार्गीले पनि आफूलाई कान्तिपुरका अध्यक्ष कैलास सिरोरियाबाट खतरा रहेको भन्दै जिल्ला प्रशासनमा निवेदन दिए । सायद् सुमार्गीले जिल्ला प्रशासनमा निवेदन दिएको समय र प्रचण्डको अन्तर्वार्ता रेकर्ड हुने समय एउटै थियो ।
आफू निकटका संचारकर्मी ज्यान बचाई पाउँ भन्दै प्रहरीमा जानु आफू भने तिनकै स्टुडियोमा कसरी अन्तर्वार्ता दिने भन्ने नैतिक संकटमा प्रचण्ड परेका हुन सक्छन् । त्यहि भएर आफू बोल्न सक्ने स्थितिमा नरहेको जवाफ कान्तिपुर टिभीलाई दिएर तत्कालका लागि प्रचण्ड उम्किएका हुन सक्छन् ।
कान्तिपुरले सुमार्गी विरुद्ध लेखेको समाचार
थाहा सञ्चारमा प्रकाशित समाचार
भारतले बाँध र ढोका खोलेको भए दुबै देशमा कम क्षति हुन्थ्योः प्रचण्ड
अरुतिर तेस्रो भएपनि दुई नं. प्रदेशमा पहिलो बन्ने दाहालको दाबी
प्रचण्ड भन्छन्, ‘गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सपना पूरा गर्नुछ’
Be the first to comment on "प्रचण्डद्वारा कान्तिपुर यसकारण बहिस्कार !"